Star Adọrọ Iji Ileta The Vatican City | Save A Train
Home > Zụọnụ Ndụmọdụ > Star Adọrọ Iji Ileta The Vatican City
(Emelitere ikpeazụ On: 29/12/2019)
Ọ bụrụ na ị na-ebi Europe na na ị nwetara a izu ụka ihapu (ma ọ bụ ihe dum izu!), asị “ee” ka Ileta na Vatican City via okporo ígwè na-enwe na ya na zuru ọsọ!
Eme atụmatụ na Ileta na Vatican City?
ebe ọ bụ na 1929 na Vatican nwere kemgbe ihe nọọrọ onwe ha ala na ndị kasị nta na onye na ụwa. ka, na mgbe ebelatawo ebube ya, ịma mma, na ya tremendously egwu na omenala na akụkọ ihe mere eme pụtara. Ọ bụ ezie na onwere n'ime naanị 0.44 square kilomita, Vatican si nwetara ọtụtụ nkiri na- njem nleta ọrụ n'aka: si St. Peter nnukwu ụlọ ụka Senti na Sistine banye n'Ụlọ Ekpere (na ihe ọ bụla ọzọ dị n'etiti), ị ga-n'anya ọ bụla nke abụọ nọrọ Vatican.
Dị ka Ileta na Vatican City via okporo ígwè na-aga, e nwere otu oge a electric ụgbọ okporo maka niile Vatican enthusiasts. The ụgbọ okporo ígwè na-ejikọta Vatican City n'ọdụ ụgbọ okporo ígwè with the Pontifical Villas.
Ebe a na-a ole na ole kpakpando nkiri na Vatican na ị chọrọ ileta na nweta ọtụtụ gị Italy ahụmahụ.
The ebube St. Peter nnukwu ụlọ ụka Senti bụ centerpiece nke Vatican, wuru na ihe a na-eche na-ebe St. Peter ili ozu.
St. Peter nnukwu ụlọ ụka Senti bụ ihe fọrọ nke nchikota nke ama ama artists 'ọrụ. Kpomkwem nrube-pụtara ìhè, nkà na St. Peter nnukwu ụlọ ụka Senti amalite tupu ị tinye ụka. Ị ga mbụ ahụ Bernini si oyiyi nke Constantine tinyere foduru nke Giotto si Mozis n'elu isi doorway. Ha amara n'ihe owuwu ụzọ mbata, na 185m ogologo na 46m ogologo nave adahade a dome 119 mita n'elu! ndammana, e nwekwara Michelangelo ama Pietà na ị ga-ekweghị gị n'anya! Lee n'ụba mma banye n'Ụlọ Ekpere nke sacrament, Bernini si ebube Baroque ọla Baldacchino, na Papal ịchụàjà na ọtụtụ ihe ndị ọzọ.
Rimini ka Rome Ụgbọ oloko
Verona ka Rome Ụgbọ oloko
Sistine banye n'Ụlọ Ekpere
Ikpọ n'onwe ya, na Sistine banye n'Ụlọ Ekpere bụ ihe ọzọ na saịtị ị ga-esi na-ahụ ma ọ bụrụ na ị na na-eleta ndị Vatican City via okporo ígwè. Wuru Pope Sixtus IV na 1473-84 ma weghachi site na 1980 ka 1994, Sistine banye n'Ụlọ Ekpere esetịpụ frescoes site na ọtụtụ nka. Ime aha Michelangelo, Perugino, Pinturicchio, Botticelli, Rosselli, Ghirlandaio, na Signorelli pụtara ihe ọ bụla? Ọfọn, ha nyeere ka mgbidi nke Sistine banye n'Ụlọ Ekpere elu nke Renaissance sere. Michelangelo si Ikpe Ikpeazụ ese n'ime banye n'Ụlọ Ekpere a na-ewere ihe ndị kasị dị ịrịba ama na kasị dị ịrịba ama ihe nweta nke European art.
Sistine banye n'Ụlọ Ekpere bụ ebe conclave-ahọpụta a Pope ẹkenịmde. Daily, ọtụtụ narị njem nleta na-enwe mmasị ya, na - ị nwere ike ịbụ otu ha, oke!
Otu n'ime ihe ndị kacha mma ihe banyere Ileta na Vatican City site okporo ígwè bụ na ọ na-enye gị ohere ahụ fọrọ nke nta niile oké mkpa nlegharị anya na Vatican.
Vatican Museums Njirimara a n'usoro ndokwa ngosi e site poopu Clement XIV na Pius VI si 1769 ka 1799. ndị a veranda ndị a na-edebe akụ trove nke ịrịba iberibe na ọ pụta ìhè dị nnọọ ole na ole bụ nnọọ ike! Onye ọ bụla nwere ihe pụrụ iche na-enye:
Sala a Croce Greca ebe a n'ụba mma red porphyry sarcophagi of Constantine ada, Constantia, nne-ya
Sala delle echiche egosi Belvedere toso, a na narị afọ mbụ-BC Michelangelo-enwe mmasị n'ebe ọrụ site Apollonius of Athens
Gabinetto delle Maschere nwere a dị ebube Mozis n'ala nke egwuregwu masks si Villa Adriana na Tivoli
Cortile del Belvedere esetịpụ Apollo Belvedere, otu n'ime ndị kasị ama awụ na Vatican
Galleria delle oyiyi atụmatụ ndị kasị mma oge ochie candelabras – na Barberini Candelabra – nwekwara si Villa Adriana na Tivoli
Siena ka Rome Ụgbọ oloko
Lucca ka Rome Ụgbọ oloko
Pope n'oge okpomọkụ obibi, The Pontifical Villas – Barberini Gardens kemgbe na-emeghe ka ọha na eze ebe ọ bụ na March 2014. The n'ọnụ ụzọ bụ ụdị siri ike ịhụ ka ọ na-adịghị signposted. Ubi nke a ebube ebe ihe karịrị 2000 afọ, springing atọ etoju. Ha bụ pụtara na ọma setịpụrụ, na ikpeazụ larịị na-egosi na akàrà nke dị iche iche poopu boxed na hedges.
Iji na-enwe gị njem mgbe Ileta na Vatican City via okporo ígwè, Search your origin and pick Rome on Zọpụta a Train website ka akwụkwọ a ụgbọ okporo ígwè tiketi n'ime nkeji na-amalite gị Vatican obi ụtọ mee elu mee ka ị ga-atụ anya!
Ị chọrọ Embed anyị blog post jidesie gị na saịtị, wee pịa ebe a: https://embed.ly/code?url=https://www.saveatrain.com/blog/visiting-vatican-rail/- (Pịgharịa gaa na ala ịhụ Embed Usoro)
Ọ bụrụ na ị nwere a website, ị nwere ike jikọọ anyị Zọpụta A Train RSS ndepụta.
Best Chinese Ụlọ oriri na ọṅụṅụ Na Europe
Njem ụgbọ oloko, Train Travel Austria, Ingbọ oloko na Belgium, Inzọ Njem Italytali, Train Travel The Netherlands, Travel Europe
5 Ebe Obodo Iji Gị On Lake Como
Inzọ Njem Italytali, Train Travel Switzerland